दिनको नौ हजार पाइला हिँड्नुहाेस र स्मरणशक्ति गुमाउन बाट जाेगिनुहाेस - ज्ञानविज्ञान
दिनदिनै हल्काफुल्का व्यायाम गर्दा स्मरणशक्तिको ह्रास र व्यवहार परिवर्तन रोक्न सहायता गर्छ । हार्वर्ड मेडिकल स्कूलका अनुसन्धानकर्ताहरूले दिनको ९ हजार पाइला (लगभग ८ किलोमिटर) हिँड्दा अल्जाइमरको समस्या कम गर्न सकिने बताएका छन् । कुल १८२ मानिसमाथि गरिएको अनुसन्धानबाट यो कुरा सार्वजनिक भएको हो ।
दैनिक तीस मिनेट पैदल हिँड्नुहोस्
शरीरलाई स्वस्थ राख्न हिड्नु पर्छ । दिनमा कम्तीमा तीस मिनेट नियमित हिँड्नाले मुटु स्वस्थ रहनुका साथै हड्डी बलियो हुुन्छ । पैदल हिँड्नाले शरीरको बोसो कम हुनुका साथै उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल तथा टाइप २ मधुमेह नियन्त्रित हुने गर्छ ।जोर्नीको दुखाई , मांसपेशीको समस्या कम हुनुका साथै ओस्टियोपोरोसिस तथा अन्य प्रकारका क्यान्सरको जोखिम समेत कम हुन्छ ।
र, हिँडडुल गर्नाले मोटोपनाको समस्या भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा तथा लामो समय निस्त्रिmय जीवन विताइरहेका मानिसको लागि समेत फाइदाजनक हुन्छ । यसले उनीहरुको शारीरिक गतिविधि बढाउँछ । शरीरलाई फिट राख्न मद्दत गर्छ ।क्यान्सर सोसाइटीका अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार सातामा औसत छ घण्टा वा सो भन्दा बढी पैदल हिँड्ने व्यक्तिको आयु लामो हुने गर्छ ।
हवार्ड मेडिकल स्कुलको एक अध्ययन अनुसार पैदल हिड्नाले मुटु सम्बन्धि रोग लाग्ने जोखिम ३१ प्रतिशतसम्म कम हुने गर्छ । र, मुटु सम्बन्धी रोगका कारण मृत्यु हुने खतरा ३२ प्रतिशत कम हुने गर्छ ।तर अहिले मानिसहरु सुविधाभोगी भएका छन् । एक पाइलाको बाटोमा पनि सवारी साधन खोज्छन् । सब्जी किन्नका लागि मोटरसाइकल चढ्छन् ।
दैनिक तीस मिनेटको हिँडाई शरीरका लागि स्वस्थ मानिन्छ । हिँड्दा लामो लामो पाइला चाल्नु पर्दछ । कयौ मानिसलाई एकै पटक छिटो छिटो हिँड्न गार्‍हो हुनसक्छ । त्यो नहोस् भन्नका लागि मानिसले सुरुमा विहान दिउँसो र बेलुकी दश/दश मिनेटको यात्रा तय गर्न सक्दछन्।
-जब उनीहरुमा हिँड्ने बानीको विकास हुन थाल्छ, तब उनीहरुले यो क्रमलाई क्रमश बढाउन सक्दछन् ।
-यसले शरीरलाई फिट राख्नुका साथै तौल घटाउन समेत सहायता प्रदान गर्छ ।
-शारीरिक क गतिविधिको विकास गर्ने
-यसरी हिँड्दा अन्य तरीका पनि अपनाउन सकिन्छ । जसले हिँड्ने बानीको विकास अझ प्रभावकारी ढंगले गर्दछ ।
तपाई छिटोछिटो हिड्न मन पराउनुहुन्छ कि दौड्न ? छिटोछिटो हिडाई र दुगुराई दुबै मुटुसँग सम्बन्धित व्यायाम हुन । तपाईको जोर्नी वा शरिरको कुनै तल्लो भागमा पीडा भएमा हिड्नु निकै उत्तम मानिन्छ । तपाईले हिडाईमा कति मात्रामा क्यालोरी सक्नुहुन्छ भन्ने विषय तपाई हिड्ने गतिमा पनि निर्भर हुन्छ । हल्का हिडाई एक प्रकारको मझौला व्यायाम हो किनकी यसले मुटुको चाल र रक्त प्रवाह बढाउनुका साथै कम प्रयत्नमा शरिरको फ्याट वा चिल्लोलाई पगाल्न सहयोग पुर्याउछ ।
Don't Miss it के तपाईलाइ जति बेला पनि अल्छि लाग्ने गर्छ ? यस्ता छन् अल्छीपना हटाउने प्रभावकारी उपाय
Up Next किन केटाकेटीकाे दाँतमा बढि किरा लाग्ने गर्छ ? जान्नुहाेस्
जाडोमा गर्नै नहुने केहि गल्तीहरु
मौसमी परिवर्तनले शरीरलाई धेरै प्रकारले प्रभाव पार्छ। अत्यधिक चिसोका कारण रुघा, खोकी, एलर्जी र ज्वरो जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। मानिस…